Fizaham-pahasalamana maimaimpoana maro samihafa toy ny fitsapana ny tosidra, ny fitiliana ny aretina diabeta, ny fijerena maso no natao ka olona hatrany amin’ny 2.500 isa no nahazo tombontsoa. Tranoheva miisa 20 no indray niara-nandray anjara tamin’izany. Samy nanana ny andraikitra noraisiny avokoa izy ireo, hoy Rtoa Nirina Rabemila, filohan’ny fikambanana Lions Club Santatra. Tao ohatra ireo niresaka ny diabeta sy ny nify fotsiny, tao ireo niresaka ny diabeta sy ny maso. Nomena vahana ihany koa ny firesahana momba ny diabeta sy ny fanatanjahantena. Ny hahafahana manentana ny olona tsy hanao antsirambina ny fahasalamany no tanjona sady entina hanampiana ireo tokony hanatona mpitsabo ihany koa saingy noho ny fahasahiranana dia tsy afa-manoatra. Tsy hijanona ho an’ny mponin’Antananarivo irery ihany moa izao hetsika fizaham-pahasalamana maimaimpoana tanterahin’ny fikambanana Lions Club izao raha araka ny fanazavana azo fa hiparitaka any amin’ny faritra ihany koa. Ho an’ireo hita fa tena marary kosa dia horaisin’ireo mpiara-miasa amin’ny fikambanana akaiky ny fitsaboana azy ireny ka ho an’ireo voan’ny diabeta, ohatra, dia horaisin’ny Amadia an-tanana ny fikarakarana ny fahasalaman’izy ireny. Ho an’ireo marary maso kosa dia ny LSFM ( Lions Sight First Madagascar) etsy amin’ny hopitaly HJRA no hijery manokana azy ireny sady hivarotra solomaso amin’ny vidiny mirary ho an’ireo izay mila. Saika manana olana amin’ny fizaham-pahasalamana avokoa ny ankamaroan’ny Malagasy ankehitriny noho ny hasarotan’ny fiainana ka voatery manenjika ireny fitiliana maimaimpoana ireny avokoa.